Bawo wethu umthandazo Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Yinto eyaziwayo ukuba amaKristu amaninzi ayayazi i Bawo wethu, Kungenxa yoko le nto ngoncedo lweli nqaku, zonke iinkcukacha ezinomdla ngazo ziya kutyhilwa.
Zonke ezona nkcukacha zibalulekileyo malunga Mthandazi Bawo Wethu
1 Umthandazo kaTata wethu
2 UBawo wethu
3 Ngomzuzu wokuthandaza uMthandazo kaTata wethu
4 Intsingiselo yoMthandazo weNkosi
4.1 Sakwazi ukuqonda ukuba ngubani uThixo
4.2 Thandaza uBawo wethu: Singachaza ngentembelo epheleleyo kwintando yakhe
4.3 Ukutya kwemihla ngemihla kuyacelwa
4.4 UTata Wethu Othandazayo: Sicela uxolelo kwaye siyazihlola
4.5 Sithandazela ukukhuselwa kunye noNqoba
Umthandazo kaTata wethu
La Mthandazi Bawo Wethu, UBawo wethu okanye ngesiLatin, uPater Noster, waziwa ngokuba ngumthandazo wamaKristu ngokugqwesa, ecaciswa nguYesu waseNazarete ngokweVangeli kaMateyu (Mt 6, 9-13) kunye neVangeli yaseKucas (Lk 11, 1) - 4).
Nangona kukho umahluko kwinkcazo yeemeko kunye nesimbo sokubhaliweyo UBawo wethu kubabhali abahlukeneyo, zombini ngokucacileyo ziyahambelana kwindawo yezikhalazo. Kwelinye icala, uMthandazo weNkosi uthathelwa ingqalelo umthandazo oqhelekileyo wamaKristu ngenxa yokuqaqamba kwesivumo sokholo.
Kwicawa nganye yamaKatolika, yamaOthodoki, yeAnglican neyamaProtestanti UBawo wethu ngumzekelo womthandazo wamaKristu.
Bawo wethu osemazulwini, Malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.
Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla; Usixolele izono zethu, njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo; ungasingenisi ekuhendweni, kwaye usihlangule ebubini. Amen.
Ngexesha lokuthandaza u UBawo wethu
Yinto eyaziwayo ukuba UBawo wethu Kukuba, kwinqanaba eliphezulu lamathuba, umthandazo owaziwa kakhulu kwaye uphindaphindwe ngawo onke amaKristu; Kulula ukufumana kwiincwadi zeVangeli, ngakumbi kuMateyu 6: 9-13 nakuLuka 11: 2-4. Apho kuyakubonwa ukuba uYesu wasebenzisa lo mthandazo njengomzekelo ukufundisa abafundi bakhe ukuthandaza.
Ngokuba nalo mzekelo womthandazo sijonga indlela i Bawo wethu, Ekholisa uThixo, iyakwazi ukuba lula kwaye inyaniseke. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba ivele emazantsi entliziyo kwaye ichaze oko kusikhathazayo ngaphakathi.
Xa sithandaza, kubalulekile ukuqonda amandla, ubukhulu bukaThixo kunye nemfuno esiyigcinayo kuye. Masicamngce ngamazwi weNkosi UBawo wethu kwaye masiyazi intsingiselo yayo ngokufunda ukuthandaza nomzekelo kaYesu.
Kufuneka uthandaze ngolu hlobo: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho, mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla; Usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolele abanamatyala kuthi. Kwaye musa ukuvumela ukuba siwele esilingweni, kodwa sihlangule kongendawo ”.
(UMateyu 6: 9-13)
Intsingiselo ye- UBawo wethu
Nje ukuba indlela efanelekileyo yokuthandaza ithathelwe ingqalelo umthandazo owaziwayo, lixesha lokuba uyazi intsingiselo UBawo wethu.
Sakwazi ukuqonda ukuba ngubani uThixo
"Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho ..."
Njengoko sithandaza, siqala ngokwamkela ukuba sizifumana sithetha noThixo, uBawo wethu. Ngale ndlela, siyakwazi ukuba yinxalenye yosapho olukhulu ngokuba ngabantwana bakhe kwaye siyabulela koku, siya kuba nakho ukuthetha naye ngokuthe ngqo ngaphandle kokuxhomekeka kubalamli.
Kuyaziwa ukuba uBawo wethu uyakwazi ukusimamela kwaye siyabulela koku, sinokuthetha ngokuzithemba okukhulu nokuba kungomzuzwana.
UBawo wethu: Singabonisa ngokuzithemba ngokupheleleyo kwintando yakho
Ubukumkani bakho mabufike, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.
Apho kulawula khona uThixo, nganye yazo iba ngcono. Ubukumkani bakhe buzele kokusesikweni noxolo; UThixo uyazi into esiyifunayo ngawo wonke umzuzu naphakathi kwayo nayiphi na imeko. Kubalulekile ukuba ufunde ukuzithoba kumyolelo wakho ngokuthemba intando yakho ngamehlo.
Ukutya kwemihla ngemihla kuyacelwa
Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla;
UThixo nguye yedwa okwaziyo ukuhlangabezana neemfuno zethu, yiyo loo nto kukhankanyiwe kuMthandazo; Kufuneka sicele isonka semihla ngemihla ukuze isibonelele iimfuno zethu ezisisiseko. Kwelinye icala, iimfuno zethu kufuneka zibandakanye iimfuno zabazalwana bethu, umnqweno wethu kukuba wonke umntu abe nophahla, ukutya kunye nokutya.
UBawo wethu: Kucelwa uxolelo kwaye sizivavanye
"Usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolele abanamatyala kuthi."
Ngumzuzu apho zonke iimpazamo zethu zamkelwe ukuba zicele ukuxolelwa nguThixo, nguye kuphela onokusixolela ngokupheleleyo, obuyisela iintliziyo zethu kwaye asinike ithuba lokuba siqale ngokutsha.
Kungalo mzuzu kwaye sinesimo sengqondo esinokuthi sithathe ixesha lokuvavanya iintliziyo zethu kwaye sazi ukuba ukulungela kwethu ukuxolela abo bangaphumelelanga kuthi. Ngaba sibaxolele? Ngaba sikwazile ukubonisa inceba kunye nombulelo ofanayo nalowo asinike wona uThixo?
“Kuba xa nithi nibaxolele abanye iziphoso zabo, uYihlo osemazulwini wonixolela nani. Kodwa ukuba anibaxoleli abanye iziphoso zabo, noYihlo ke akayi kunixolela ezenu.
(UMateyu 6: 14-15)
Sithandazela ukukhuselwa kunye noNqoba
«Ungasingenisi ekuhendweni, kodwa sihlangule kwesikhohlakeleyo, kuba bobakho ubukumkani namandla namandla ngozuko ngonaphakade. Amen. "
Okokugqibela, singabantu kwaye ngenxa yoko, sinokuba buthathaka kwiimeko ezithile, kodwa uThixo akasishiyi sodwa kwimizabalazo yethu yezilingo nobubi. Uhlala ehlala esondele kuthi kwaye ngaphandle koko, unamandla ngaphezu komubi.
KuThixo nakwisixhobo asinike sona, sinokhuselo lwenene ekuchaseni iimeko notshaba (Efese 6: 20-13). UThixo nguye osilwelayo kwaye ngenxa yakhe sifumana uloyiso lokugqibela.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo kuMntwana oNgcwele uYesu.